EEBBISAA ADDUNYAA: SEENAAF YAADANNOO EBLA 30/2021 | OROMOTV
EEBBISAA ADDUNYAA: SEENAAF YAADANNOO EBLA 30/2021
BBC AFAAN OROMOO:Kana malees sirboota aadaa, kan jaalalaa fi geerarsaanis ni beekama jedhu hiriyoonni isaa.
Seenaan Eebbisaa kan hanga ammaatti hin dubbatamneef ga’ee inni Afaan Oromoo guddisuu keessatti gumaacheedha.
”Maatirikii fudhatee utuu qabxii eeggataa jiruu Fulbaana keessa warri keenyaa ABOn dhufanii jennaan isaanumatti makame.” jedhan.
Lixa Oromiyaa magaalaa Dambi Doolloo keessatti dhalatee umurii ijoollummaasaa qabsoo Oromootti dabarse kan jedhan Aadde Sannaayit , keessumaa qubee afaan oromoo barsiisuurratti magaalaa Danbi Doollootii haga Asoosaatti demee hojjeteera jedhan
Hacuuccaa ummata Oromoorra ga’aa tureef onnee guutuudhaan qabsaa’aa ture kan jedhan Aadde Sannaayit, erganni isaan biraa deemeellee itti deddeebi’anii of biratti deebisuuf yaalanillee inni garuu kaayyoosaarraa duubatti deebi’uu hin barbaanne jedhan.
Amma kunoo waggaa 21 fixeera, bara 1988, Hagayya guyyaa 24 ajjeefamee, gaafa 27 dhufee na biratti awwaalame. Gumaa gootaa gootatu baasa, gumaan mucaa kootii hin hafu, waaqayyo yeroo eegee gumaa ni baasa.” jechuun ammallee eelaa qaban dubbatu Aadde Sannaayit.
Ajjeechaa Hacaaluu Duuba eenyuutu jira?
”Seenaasaa qaba malee mucaan koo dhalas hin qabu, maallaqas keewwatee hin qabu, hammanumammoo seenaansaa olba’uusaatiif, qabsoonsaa ija godhachuusaatti baayyeen itti boona.”
Ummata Oromoo biratti iddoo guddaa kan qabu Wallisaa Tseggaayee Dandanaa Eebbisaa Addunyaa gara baandiitti seenee muziqaa kaassettaan baasuusaan duratti dandeettii gitaaraa qabuun sirboota qabsoo fi aadaatiin waraana bashannansiisaa ture jedha, kaaseta irratti wareegame ammo Baandii Bilisummaa keessatti hojjete jedhe, akkaataan du’asaa baayyee nama gaddisiisa jedha Tsegaayeen.
”Eebbisaa Addunyaa akka qabsaa’aattin beeka. Muuziqaas baayyee jaallata. Eebbisaan Gitaara qaba.Gitaaraasaatiin hojjenna. Yeroo hunda walargina Eebbisaa wajjin. Anii fi Tottoobaan Gitaara Eebbisaarraa ergifannee qophii cidhaafaarratti ittiin wallisnee deebisnaaf.” jedha Daawwiteen.
Akkasitti gargar gallee, guyyaa beellamaa sana garuu Eebbisaan du’uusaa dhageenye. Edaa inni guyyaa Kamisaa, akkas, du’e jechuu dhageenye.” jechuun yaadannoo gaddaan guutame nutti himeera Daawwiteen.
”Reeffasaa Hospitaalatti ilaaluuf wayita deemnu namoonni keenya iddoo sanaa akka deemnu nutti himan. Haalli naannoo ture sodaachisaa waan tureef, isinis isin ajjeesu jedhanii achii nu deemsisan. Sirriimattillee utuu reeffasaa hin argin gargar baane.Reeffasaas biyyumatti ergan.” jechuun dubbata Daawwiteen.
Wayita sana kaaseta maqaan ‘An dhufeen jiraa’ jedhamuun beekamu hojjechaa jiraachuu kan dubbatu Daawwiteen erga albamasaa xumuree sirba tokko keessaa baasee sirba ittiin Eebbisaa yaadatu keessa buusuusaa dubbata. ”Garuu maalan godha utuun sirbuun boo’aa, Eebbisaa Yaadatee keessi koo boba’aa.” jechuun sirbe.
”Bara Afaan Oromoo dubbachuun rakkoo turetti Addi Bilisummaa Oromoo qubee barsiisuun ija nu banachiisanii turan. Warra kana godhe keessaa Eebbisaan tokko. Ga’ee inni Afaan Oromoo guddisuu, qubee Faan Oromoo barsiisuu keessatti qabu namni hin beeku. Wallisummaasaa qofa beeka namni. ”
Ifaajeen keenyas lafatti hin badne. Firii godhachaa jira.”kan jedhu Hirphaan Geerarsan ittiin Eebbisaa yaadatu Geerareera. Walaloon kunoo.
1 thought on “EEBBISAA ADDUNYAA: SEENAAF YAADANNOO EBLA 30/2021”
Pingback: EEBBISAA ADDUNYAA: SEENAAF YAADANNOO EBLA 30/2021 – Gabbaa)press